Mampitombo ny fahaizanao
Omeo ny vahaolana tsara indrindra
Manana traikefa tena manan-karena amin'ny maso ivoho izahay
Jinan Terry CNC Tool Limited Company dia masoivohom-panjakan'i Sina feno ho an'ny fitaovana fanapahana CNC nafarana.
Ny orinasanay dia mifikitra amin'ny filozofia momba ny "Fahamarinana, fahatokisana, vaovao, haingana, tsara ary tsy lafo" ary ny foto-kevitry ny "Buy the rest assured that with reality, to supply the import world malaza CNC fitaovana for mekanika fikirakirana orinasa.
Manana manam-pahaizana momba ny teknika malaza eran'izao tontolo izao izahay izay manana traikefa an-taonany maro amin'ny motera maotera zokiolona, ​​mba hahafahanay manome fanohanana ara-teknika ho an'ny mpanjifa farany.
Ny orinasanay dia ampahany manan-danja amin'ny indostrian'ny milina, mitondra ny rafitra iray manontolo.
Izahay dia mizara vokatra miaraka amin'ny rafitra, ao anatin'izany ny marika Imported: Seco, Titex, Walter, TITEX, Valenite, DORMER, Kennametal, Mitsubishi, Sumitomo, Kyocera Ceratip, Tungaloy, Osg, Djijet, Nachi, Hitachi Tool, Big, Iscar, Mo Case Sol, Vargus, Guehring, Schunk, Lmt, Ceracizit, Taegutec, Korloy, ary YG sns. Marika an-trano: ZCCCT, Zigong Greatwall, Zhuzhou Jingcheng, Jiangxi Zhangyuan, Jiangxi Tianhe, Chengdu Engga, Harbin First Tools, LINKS, Southwest Tools, Chengdu Measuring Tools, Shanxi Carbide simenitra, Carbide simenitra Zhuzhou ary STWC sns.
Manana vokatra andianà marika etsy ambony toa ny: NC fanapahana faribolana, fitaovana fanapahana NC, fitaovana mafy, fantsom-pirafesan'ny milina, fantsom-bozaka, bara fanapahana, fikirakirana ary mpihazona fanapahana sns Ary azontsika antoka fa ny tahiry rehetra dia 100% tany am-boalohany.
Jinan Terry CNC Cutting Tools Co., Ltd. manohana ny hevitra fitantanana "mpanjifa voalohany indrindra", mandray an-tsitrapo ny olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra hitsidika hifampiraharaha amin'ny fiaraha-miasa
. Jinan Terry CNC Tool Shop dia mifantoka amin'ny fanafarana sy fanondranana fitaovana fanapahana cnc sy fitaovana fandrefesana, izay malaza amin'ny trano sy any ivelany.
Manome karazana na karazana entana isan-karazany amin'ny mpanjifa izahay, anisan'izany ny fampidirana, endmills, mpitaona fitaovana, micrometer, calipers sns. Miasa amin'ny maha-mpaninjara za-draharaha ny marika malaza eran-tany, ny tanjonay dia ny hanomezana vokatra avo lenta sy lafo vidy ho an'ny mpanjifa manodidina izao tontolo izao ary mametraha fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy tsara aminao.